Undoqo impumelelo J & S Botanics yeyona ubuchwepheshe bethu phambili. Ukususela nkampani yasekwa, sisoloko zazigxininisa kwi uphando oluzimeleyo kunye ezintsha. Siye waqesha Dr. Paride ukusuka Italy sisazinzulu oyintloko wethu wakha iqela a 5 amalungu R & D ngeenxa zonke kuye. Kule minyaka idluleyo, eli qela liphuhlise elinesibini yeemveliso ezintsha ze zisonjululwe imiba emininzi engundoqo yobugcisa nokwandisa inkqubo yethu imveliso. Ngeminikelo yabo, inkampani wethu umi ngaphandle kolu shishino ekhaya kunye ehlabathini. Sinento patents 7 leyo ibandakanya iinkalo ezahlukeneyo iiteknoloji gesi. Ezi technologies kusenza sikwazi ukuvelisa izicatshulwa unobunyulu ephakamileyo, umsebenzi ephakamileyo bemvelo, intsalela ephantsi ngesifo amandla aphantsi.
Ukongeza, J & S Botanics iye axhobe abaphandi zethu kunye nemeko nezixhobo zelebhu art. iziko lethu uphando kufakwa tanki amancinci naphakathi gesi, evaporator rotary, ikholam amancinci naphakathi chromatography, concentrator ungqukuva, umatshini amancinci emoyeni yokomisa nenqaba owomileyo mini zokutshiza, njl kufuneka ivavanywe Zonke iinkqubo imveliso yaye zivunywe elabhoratri phambi yemveliso mass kwi mveliso.
J & S Botanics igcina-mali enkulu R & S ngonyaka ngamnye, njengokuntshula ngonyaka kwi persenti-15%. Injongo yethu kukuba ukongeza iimveliso ezimbini ezintsha qho ngonyaka kwaye, ngenxa yoko, ukuqinisekisa ukuba inkampani phambili kwishishini yokutsala isityalo ehlabathini.